जिल्ला अदालत कास्कीबाट गिरफ्तार नेता रुपेशलाई गोर्खा पुर्याएर शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको “झुट्ठा” मुद्दा – JanaSanchar.com
जिल्ला अदालत कास्कीबाट गिरफ्तार नेता रुपेशलाई गोर्खा पुर्याएर शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको “झुट्ठा” मुद्दा
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ आश्विन ११, शनिबार) १२:३४
जिल्ला अदालत कास्कीबाट गिरफ्तार गरिएका विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. कास्कीका जिल्ला ईञ्चार्ज कृष्ण वाग्ले “रूपेश” लाई रातारात गाेर्खा पुर्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय गाेर्खाले शुक्रबार शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएकाे भन्दै झुट्ठा अाराेप लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाेर्खामा सार्वजनिक अपराध मुद्दा अन्तरगत १० दिन म्याद थप गरेकाे छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीकाे अादेश लत्याउँदै गिरफ्तार बिहिबार गरिएका विप्लव नेतृत्वकाे ने.क.पा. कास्कीका ईञ्चार्ज कृष्ण वाग्ले “रूपेश”लाई प्रहरीले रातारात जिल्ला प्रहरी कार्यालय गाेर्खा पुर्याएकाे थियो ।
उनलाई गएको बिहिबार मात्र जिल्ला अदालत कास्कीले साधारण तारेखमा छाड्ने अादेश दिएकाे थियाे । तर उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुनः गिरफ्तार गरेकाे थियाे ।
यसैबीच, नेता रुपेशका दाजु मुकेश वाग्लेले आफुलाई आफ्नो भाईसंग राम्रोसंग भेटघाट गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन्। उनले आफ्नो भाईसंग राम्रोसंग कुराकानी गर्न समेत नदिएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो भाई रुपेशलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खा लगेर शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको झुट्ठा मुद्दा लगाएको भनिए पनि जिल्ला अदालत गोरखामा पनि लगिएको आफुलाई जानकारी आएको बताए। उनले आफ्नो ‘भाई रुपेशलाई जिल्ला अदालत गोर्खा किन लगियो ?’ भन्ने बारेमा जानकारी समेत नदिएको उनको गुनासो छ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश लत्याउन्दै गिरफ्तार गरिंदै ने.क.पा. कास्की इन्चार्ज रुपेश
नेता रूपेश र पत्रकार ओम हमाल लाई गत भदाै ६ गते पाेखरा महानगरपािलका वडा नं. ३३ खुदीबाट सादा पाेशाकका प्रहरीले गिरफ्तार गरेकाे थियाे । गिरफ्तार पत्रकार हमाल सर्वाेच्च अदालतकाे गत भदाै २४ गतेकाे अादेशले रिहा भएका छन् भने रिहा गर्न सर्वाेच्च अदालतले अादेश दिए पनि अदालतकाे गेटबाटै गिरफ्तार गरेकाे थियाे ।
गत भदाै ६ गतेपछि नेता रूपेशलाई प्रहरीले विभिन्न अाराेप लगाउँदै तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा जिल्लाका प्रहरी हिरासतमा पुर्याएकाे थियाे ।
(२०७६ आश्विन ११, शनिबार) १२:३४ मा प्रकाशित